एसईई दिन डेरा बसेकी किशोरीको मृत्युमा प्रहरीकै संलग्नता ! « प्रशासन
एसईई दिन डेरा बसेकी किशोरीको मृत्युमा प्रहरीकै संलग्नता !
सुर्खेत । एसईई परीक्षा दिन डेरामा बसेकी किशोरीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीकै संलग्नता भेटिएपछि घटना थप रहस्यमय बनेको छ।
डेराबाहिर लगेर किशोरीलाई बलात्कार गरिएको र हत्या गरेर कोठामा छोडिएको अनुमान प्रहरीको छ। प्रहरी जवानकै नेतृत्वमा सोमबार मध्यराति किशोरीलाई डेरादेखि टाढा चौरमा पु¥याएर यौनजन्य अपराध भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
गोरीकलाका आफन्तले बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारवाही माग गरिरहेका छन्। एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले भने, ‘किशोरीको हत्या भएको देखिन्छ, बाहिर हत्या गरेर नै कोठामा छोडेको पाइयो।’ घटनाको अनुसन्धान भइरहको र दोषीलाई कानुनी कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ। सूर्यप्रकाश मावि, पलैटेकी छात्रा रोकायले विद्याज्योति मावि बाबियाचारैबाट एसईई परीक्षा दिइरहेकी थिइन्। दोषीलाई कडा कारवाही माग गर्दै महिला अधिकारकर्मीले स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।